यसै रह्यो भने गठबन्धनलाई पनि भन्न सकिन्न | सहारा टाइम्स
Home » Politics » यसै रह्यो भने गठबन्धनलाई पनि भन्न सकिन्न
यसै रह्यो भने गठबन्धनलाई पनि भन्न सकिन्न
छ महिनासम्म मधेशमा आन्दोलन गरेपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । मधेशी मोर्चाकै नेताहरुले दावी गरे अनुसार सरकारसँग ३६ पटकसम्म वार्ता पनि गरेका छन् तर केही प्राप्त गर्न सकेन ।
यत्रो घनघोर आन्दोलन गरेपनि उपलब्धी कनि हासिल भएन त ? यसको जवाफ मधेशी जनताले अझै पाएका छैन । बरु मधेशी नेताहरुलाई राज्यलाई दोष देखाएर पन्छिने काम गरिरहेका छन् । होला राज्य पनि त्यसमा कतै नकतै दोषी होला तर के मधेशी मोर्चाका नेताहरु दुधबाट धोएका हुन त ? पक्कै पनि होइन ।
सद्भावना पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले भन्नुभएको थियो कि ‘आन्दोलन असफल नहुनुमा त्यसको एक व्यवस्थापन पक्ष पनि हो ।’ साँच्चै मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन अव्यवस्थित थियो । र, मोर्चाभित्रै द्धन्द रहेका कारण गर्न सकिने काम, जुन रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो रुपमा अगाडि नबढेकै हो ।
र, त्यसको प्रमुख कारक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको द्धन्द मुख्य कारक रह्यो । आन्दोलन अवधिभर यी दुई नेताबीचको द्धन्दले आन्दोलनलाई समाप्त पारेको विश्लेषणहरु पनि भइरहेका छन् ।
आपसी द्धन्दका कारण यी दुई नेताले एक अर्कालाई असहयोग गर्न थालेका थिए, एक अर्काको कार्यक्रम जान छाडेका थिए । एकले ल्याएको प्रस्ताव अर्को अस्वीकार गर्ने काम पनि भएको थियो । अर्थात त्यत्रो मरजीवनको आन्दोलन यिनै दुईजनाको कृयाकलापका कारण कमजोर भएको कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क रहेको छ ।
अहिले पनि त्यही रोग लागेको छ । संघीय गठबन्धन शुरु भएदेखि नै यी दुई नेताबीचको द्धन्द चरम अवस्थामा रहेको छ । मधेशी मोर्चालाई छायाँमा पारेर गठबन्धलाई अगाडि बढाएको आरोप राजेन्द्र महतोहरुको रहेको छ । गठबन्धनको संयोजकमा उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ । त्यसमा राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी र महन्थ ठाकुरको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी असन्तुष्ट रहेका छन् ।
यी दुई दलले खुलेर नै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठीले गठबन्धनको बैठकमै भन्नुभयो, गठबन्धनको संयोजक सम्बन्धमा आफूहरुको रिजर्भेसन रहेको छ । नेतृत्व लिने कुरामा हतार गर्नु हुँदेन्थ्यो । सबैसँग सल्लाह गरेर, सबैको उपस्थितिमा गर्दा पनि हुन्थ्यो त्यस्तो भएन ।’
यस विषयमा सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले उपेन्द्र यादव गठबन्धनको संयोजक होइन, आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक रहेको प्रतिकृया दिनुभयो जब कि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक महेक चौरसियाका अनुसार अध्यक्ष यादव गठबन्धनकै संयोजक रहेको दावी गर्नुभयो ।
गठबन्धनमा यो प्रकारको द्धन्दले आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । सद्भावना पार्टी र तमलोपा बैठकहरुमै जान छाडिसकेका छन् ।
राजधानीको विभिन्न ठाउँमा भएको कार्यक्रममध्ये कुनै पनि कार्यक्रममा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहभागि हुनुभएन । राजेन्द्र महतोले त एक आधाजना कार्यकर्ता झण्डा लिएर पठाई दिएपनि महन्थ ठाकुरले त आफ्ना पार्टीबाट कार्यकर्ता र नेता पठाउन पनि छोड्नुभयो । कार्यक्रममा अनुपस्थिति देखाउन थाल्यो । यी दुई दलले असहयोग गर्न थालेको बुझेर नै अध्यक्ष यादवले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको उपस्थितिमा जोड दिन थाल्नुभयो । जिल्ला पार्टी कमिटीलाई उर्दी जारेर जसरी पनि कार्यक्रममा उपस्थित रहन भन्नुभयो ।
त्यही कारणले कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत कार्यकर्ता तथा नेता फोरम नेपालको रहेको छ । २५ प्रतिशत अन्य दलहरुको । महन्थ ठाकुरले पछिल्लो समय चित दुखाइ गर्नुभएको छ, त्यो के हो भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा मधेशी मोर्चासँग छलफल र बैठक गर्ने तय गर्नुभएको थियो त्यसका लागि जेठ ११ गते बस्ने तय भएको थियो ।
महन्थ ठाकुरले भनेको आधारमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले १० गते अवेर रातीसम्म सबै दललाई पत्र पनि पठाउन लगाउनु भएको थियो तर उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरुले गठबन्धनलाई पत्र नआएसम्म वार्तामा नजाने अडान लिएपछि बैठकमा कोही गएन । त्यसले गर्दा महन्थ ठाकुरले चित दुखाएको उहाँ निकटका नेताहरु बताउनु हुन्छ ।
जसरी दुई नेताको द्धन्दले मधेशी मोर्चाको आन्दोलन तुहियो त्यसरी नै यो आन्दोलन पनि तुहिने बेर लगाउँदैन ।
हुन त राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले गठबन्धनलाई असहयोग गरेपनि तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिह भण्डारी, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, मधेशीे जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवलगाय अन्य आदिवासी जनजातिहरुको पार्टीले सहयोग गरिरहेका छन् ।
तर, यिनीहरुले जे जति सहयोग गरेपनि मधेशमा एउटा मनोविज्ञैनिक असर परेको छ र यसले आन्दोलनलाई कमजोर पार्छ नै । जेठ १७ गते गठबन्धनको पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिदैछ । त्यसपछि के गर्ने हालसम्म टुगों लागेको छैन ।
तमलोपाको असार ६ गतेदेखि महाधिवेशन हुँदैछ । त्यो महाधिवेशनको तयारीको बहानामा गठबन्धनप्रति कुनै चासो लिएका छैन । सद्भावना पार्टीको पनि त्यही अवस्था छ । फोरम नेपाल र अन्य केही दलले ल्याउने कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपी १७ गतेपछि गठबन्धनको गति यस्तै नरहनेमा सबैमा शंका उत्पन्न भएको छ ।